အောစာအုပ်စင်: ကောင်မလေး ၁ အောစာအုပ်စင်
ကောင်မလေး ၁ ကောင်မလေးလာခါနီးပြီ၊။ ကျော်နိုင် လက်ကနာ၇ီကိုကြည့်ပြီး အချက်ပြတယ်။ ကျွှန်တော်နှင့်ကုလား READY ပဲဆိုတဲ့သဘော ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်၊ ဟော.. ဟိုဘက်လမ်းကြားထဲကနေ ကောင်မလေး လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ. လှမ်းလာနြေ့ပီ။ လွယ်အိတ်လေး ကိုလွယ်ပြီး ထမင်းချိုင့်လေးဆွဲလာတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ကျော်နိုင့်ကို မြင်တော့ တစ်ချက်တုံ့.ကနဲဇြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ဂ၇ုစိုက်စ၇ာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့် မျက်မှောင်လေးကြုံ.ပြီး ခပ်တင်းတင်းဆက်လျှောက်လာတယ်။ သူ ခြေလှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်းမှာ ပေါင်တံ လုံးလုံးလေးဟာ ဆင်စွယ်နှာမောင်းလေးလို ဝင်းကနဲ တင်းတင်းလေး ပေါ်ပေါ်လာတယ်၊တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်နှာပေါ်ဝဲကျလာတဲံ့ ဆံနွယ်လေးကို မေးလေးဆတ်ြ့ပီး ခါထုတ်လိုက် ၇င် ပေါင်ကြားထဲက ငပဲ ဆတ်ကနဲ မတ်လာအောင် ဆွဲငင်အား ကောင်းလှပါတယ်။ ကျော်နိုင်လဲဒါတွေ စွဲပြီး ကောင်မလေးကိုလိုက်တာလေ။ ကောင်မလေးက ကိုးတန်းကျောင်းသူ မနက် ၇ နာ၇ီလောက်ဆို
ကျူ၇ှင်သွားလေ့၇ှိတယ်။ကျော်နိုင်က စောင့်ြ့ပီးရည်းစားစကားပြောတယ်။ ကောင်မလေး က ပြောရပါ့ မလားဆိုပြီး ၇ပ်ကွက်လူကြီးသွားတိုင်တော့ ကျော်နိုင် သတိပေးခံရတယ်၊ မိဘတွေကချမ်းသာတော့ မျက်နှာနာပြီး သတိပေးရုံလောက်နှင့်ပြီးတာပါ။ ဒါကိုကျော်နိုင်က မကျေနပ်လို. လက်စားချေမယ်ဆိုပြီး ကျွှန်တော်တို.နှစ်ယောက်နှင့် စောင့်တာပေါ့။ ကျွှန်တော်တို.က ကျော်နိုင့် သူငယ်ချင်းတွေပါ၊ တပည့်လို.ပြော၇င်လဲ မမှားဘူး။သူပေးတာယူ၊ သူကျွှေးတာစား။ သူတိုက်တာသောက်မိမှတော့ သူခိုင်းတာလုပ်၇တော့မှာပေါ့။ ကောင်မလေး ကားနားေ၇ာက်လာတာနှင့် ကျွှန်တော်နှင့်ကုလား တစ်ပြိုင်တည်း ကောင်မလေးကို ဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ကျွှန်တော်က ဂျိုင်းကနေမ၊ ကုလားကခြေထောက်ကနေ မပြီး ကျော်နိုင် အသင့်ဖွင့်ပေးတဲ့ကားထဲ ကိုထိုးသွင်းလိုက်ကြတယ်၊ကောင်မလေး ဟာ၇ုတ်တ၇က်တော့ အ၇မ်းလန့်ပြီးမျက်လုံးလေးအဝိုင်းသား နဲ.ကြောင်နေတယ်၊ ကားထဲေ၇ာက်တော့မှ သူအသိပြန်ဝင် လာပြီး အတင်းရုန်းကန်၇င်း အော်ဟစ်ဖို.ကြိုးစားတယ်။ မ၇တော့ပါဘူး၊။သူ.နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာ ကျွှန်တော့်လက်ဝါးထဲမှာ ဘယ်လိုမှ လှုပ်၇ှားလို. မ၇တော့ပါဘူး။ ကောင်မလေးဟာ မျက်လုံးလေး ကလယ် ကလယ် နှင့် ကျွှန်တောင်္တို.ကို ကြောက်လန်.တကြားကြည့်တယ်။ သူ.မျက်နှာလှလှလေး ဟာကျွှန်တော့်လက်ဝါးထဲမှာ သေးသေး လေး။ဒီအချီန်မှာ ပဲကျော်နိုင့် ကအသင့်ယူလာတဲ့ ဆေးထိုးအပ်ကို ကိုင်ပြီး အနားေ၇ာက်လာတယ်၊ ဆေးထိုးအပ်ထဲမှာတော့ အများထင်သလို ကလို၇ိုဖောင်းတွေ၊စီတ်ကြွဆေးတွေ မပါပါဘူး၊ B E အဆီ၇ယ်၊ vat 69 ၇ယ်၊ GRAND ROYAL WHISKY
၇ယ်ကိုေ၇ာမွှေပြီး ဆေးထိုးအပ်စလင်း ထဲထည့်ထားတာပါ။ ဒါကလဲ ကျော်နိုင်၇ဲ. အကြံ။ဟိုဆေးတွေ ဘယ်မှာဝယ်၇မှန်း မသိတော့ ကောင်မလေးကို မြို.ပြင်ခြံ အသယ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ဖြစ်အောင်လို.လေ၊ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ 10 CC စလင်းထဲက အ၇က်တွေ အကုန်မှာတော့ သူ.မျက်ဝန်းလေး ရီဝေဝေ ဇြစ်လာပါပြီ၊။ကျွှန်တော်တို.ကပို သေချာသွားအောင် ၅ မိနစ်လောက် စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ နောက် သူ.ကို ချူပ်ထားတာကိုလွှတ်ကြည့်တယ်။ အူ၇ိုင်းကောင်မလေး ဟာမူးနေပါပြီ။ သူခေါင်းထောင်နိုင်ဖို.ကြိုးစားတယ်၊ မ၇ပါဘူး။ဘယ်၇နိုင်မလဲ ..နေ.တိုင်းသောက်နေကျ ကျွှန်တော်တို.တောင် ကိုယ့်ဟာကို စမ်းထိုးကြည့်တုန်းက ချာလပတ်လည်နေတာ။ ဒီလို ကောင်မလေး ကတော့ ကမ္ဘာကြီး ချာချာလည် ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ကျော်နိုင်ကို OK တဲ့အကြောင်း လှမ်းပြောလိုက်တော့ ကျော်နိုင် ကသွေးစုပ်ခါနီး VAMPIRE တစ်ကောင်၇ဲ. အသံမျိုးနဲ. အားရပါး၇ ၇ယ်ပြီး ကားလေးကို မောင်း ထွက်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကျော်နိုင်တို. ခြံက ၇ာဘာ ခြံပါ၊ ၅ ဧက လောက်ကျယ်တဲ့ ခြံကြီးထဲမှာ ကျော်နိုင့်မိဘတွေ တခါတလေ အပန်းဖြေဖို. ဆောက်ထားတဲ့ ဘန်၈လို တစ်လုံး ၇ှိတယ်။ ကြိုက်သလောက်အော်၊ ကြိုက်သလိုဟစ် ၇ွာထဲက သဲ့သဲ့လေးလောက်ပဲကြား၇တာ။
၇ှိတဲ့အစောင့်ဆိုတာလဲ ကျော်နိုင်တို့ကမီးသေပြီးသား။ အခုလဲ ကား၇ပ်လိုက်တာနဲ. အပြေးလေးေ၇ာက်လာပြီး ကျော်နိုင့်ကို အားရဝမ်းသာပြုံးပြတယ်။ ကျော်နိုင်က အိတ်ထဲက ထောင်တန်နှစ်ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်၊ အစောင့်ခမျာ အပျော်လွန် သွားလို.ထင်တယ်။ ချာကနဲလှည့်ထွက်ပြီးမှ ဆ၇ာဘာဝယ်ပေးရဦးမလဲတဲ့။ ကျော်နိုင်က မလိုတော့ဘူး။ကားပေါ်မှာ အကုန်ပါတယ်ဆိုတော့မှ။ခြေလှမ်းသွက်သွက်နှင့် အပြေးတစ်ပိုင်းလစ်ပါတော့တယ်။ သူပျောက်သွားတော့မှ ကောင်မလေးကို ပွေ.ချီပြီး အိပ်ခန်း ထဲသယ်ရတယ်၊ ဒီတစ်ခါတော့ ကျော်နိုင်က သူကိုယ်တိုင် သယ်ပါတယ်။ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်လေ။ ဒီေ၇ာက်မှတော့ ကျွှန်တော်တို.ဘာဝင်ပါစ၇ာ၇ှိတော့မှာလဲ။ ဒါနဲ. နောက်ဖုံးထဲက အရက်ပုလင်းတွေ၊ေ၇ခဲ ပုံးတွေ ထုတ်ပြီ်းကုလားနဲ.ကျွှန်တော် ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဝိုင်းဖွဲ.လိုက်ကြတယ်။
တစ်ကြိုက်လောက်ပဲ သောက်၇ပါသေးတယ်။ကျော်နိုင်ေ၇ာက်လာတယ်။ “ဟ...ဇာတ်လမ်းမစသေးဘူးလားဟ” “စော်ကအမူး မပြေသေးဘူးကွ။ မူးနေရင်ကောင်းမှန်းသိမှာ မဟူတ်ဘူး။ သူအမူးပြေအောင်စောင့်၇င်း သွေးပူပေါ့ ၊လာ CHEERS” ပြောပြောဆိုဆိုပဲ ကျော်နိုင် ကဖန်ခွက်ခြင်းတိုက်ပြီးမော့လိုက်တော့ ကျွှန်တော်တို့လဲ လိုက်မော့ရတာပေါ့။ တစ်ခွက်လောက်သောက်ပြီးတော့ ကုလားက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူ.အကိုဆီဖုန်းဆက်ချင်လို. ဆိုကျော်နှိုင့်ဖုန်းကို နှစ်၇က်လောက် ငှားပါလို.ပြောတယ်။ ဒါမျိုှးဆို ကျော်နိုင်တို.က လက်တိုတာမဟုတ်ဘူး။ ယူစေဗျား ဆိုပြီး သူ့ဟန်းဖုန်းကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်။ နောက်တစ်ခွက်လောက်
အကုန်မှာတော့ ကျော်နိုင် က ကဲ..စမယ် ဆိုပြီး အခန်း ထဲဝင်ပြီး တံခါး ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွှန်တော်တို.ကလဲ ဘယ်နေမလဲ၊ ခွက်လေးတွေ အသာချပြီး ချောင်းကြတာပေါ့။ ကျွှန်တော်တို.ချောင်း တဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေးဟာ ကိုယ်တုံးလုံးလေး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဖြူဝင်းတယ်ဆိုတာထက်ေ၇ွှဝါေ၇ာင် ခန္ဒာကိုယ်လေး ဟာအခုတော့ ဖုံးကွယ်စ၇ာ အဝတ်တွေမ၇ှိလို. ဟာလာဟင်းလင်းလေးဖြစ်နေပါပြီ။ သူ.မျက်နှာလေးဟာ ဘေး တစ်စောင်းလေး ဖြစ်နေလို. မျက်နှာလးကိုတော့ မမြင်၇ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျော့၇ှင်းတဲ့ လည်တိုင်လေး၇ယ်။တောင်ပူစာလေးလို မို.မို.ဝန်းဝန်း ၇င်သားလေးနှစ်မွှာ၇ယ် ၊ အဆီပြင် မ၇ှိတဲ့ ဗိုက်သား ချပ်ချပ်လေး၇ယ်။ အမွှေးေ၇းေ၇း လေးပေါက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေး ၇ယ်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းမြင်နေ၇ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ ကျော်နိုင် ကသူ.အဝတ်အစားတွေ ကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင့်လီးဟာကောင်းကောင်း မတောင်သေးဘူး။ တွဲလောင်းကြီး ဟို၇မ်းဒီ၇မ်းနဲ.။အဝတ်တွေချွတ်ပြီးတာနှင့် ကျော်နိုင်ဟာ ကောင်မလေးနားကပ်သွားတယ်။ပြီးတော့ ဘယ်ဘက်နို.သီးလေးကို ငုံ ပြီးစို.လိုက်ပါတယ်။
ကောင်မလေး ဟာတစ်ချက်“အင်း ”ကနဲ ညဉ်းပြီးခေါင်းလေးလှုပ်လာတယ်။
ပြီးတော့ သူ.လက်ကလေးတွေနဲ. ကျော်နိုင် ခေါင်းကြီးကို တွန်းဖယ်ဖို.ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်းအမူးမပြေသေးတဲ့ ကောင်မလေးလက်တွေဟာ ဘာအားအင်မှ မ၇ှိလှပါဘူး။ဒီအချိန်မှာပဲ ကျော်နိုင်က သူ.ညာဘက်လက်ကြီးနဲ. ကောင်မလေး စောက်ဖုတ်ကိုအုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။
ကောင်မလေး ခေါင်းလေးထောင်ထလာတယ်။ပြီးတော့ သူ.ပေါင်လုံးလေးနှစ်ချောင်း ကို လိမ်ယှက်ပြီး အတင်းကုန်းထဖို.ကြိုးစားတယ်။ မ၇ပါဘူး။ သူ.၇င်အုံလေးပေါ်မှာ နို.သီးလေးကို အတင်းစို.နေတဲ.ကျော်န်ုင်က ဘယ်ဘက်လက်နဲ.ပဲ ကောင်မလေး ခေါင်းနောက်ကနေသိုင်းဖက်ပြီး ပခုံးလေးကို သိုင်းဖက်ချူပ်ထားလိုက်တယ်။
ထလို.မ၇တော့တဲ့ကောင်မလေးဟာ မာန်တော့ မလျှော့သေးပါဘူး။ခေါင်းလေးကိုဘယ်ညာ ၇မ်းခါ၇င်း ဘေးဘယ်ညာကိုလိမ့်ထွက်ဖို. ကြိုးစားတယ်။ ဘယ်၇လိမ့်မလဲ... ကျော်နိုင်က သူ.ညာဘက်ပေါင်တံကြီနှင့် ကောင်မလေးညာဘက်ပေါင်တံ ကိုခွပြီး ဖိထားလိုက်တယ်။ အခုဆို၇င်ကောင်မလေး လှုပ်လို.၇တာ သူ.ခေါင်းလေး၇ယ်၊ လက်နှစ်ဖက်၇ယ်၊ဘယ်ဘက်ခြေထောက်၇ယ်ပဲ ၇ှိပါတော့တယ်။
လှုပ်လို.မ၇မှန်းသိသွားတဲ့ကောင်မလေးဟာ “ အင်....လွှတ်၊ လွှတ် ၊၇ှင်မယုတ်မာနှင့်နော်။” ပြောပြောဆိုဆို သူ.လက်သည်းချွှန်ချွှန်လေးတွေနှင့် ကျော်နိုင့် မျက်နှာကြီးကို ကုပ်ဖဲ့ဖို.ကြိုးစားတယ်။ ကျော်နိုင်က “ဟင်” ကနဲ တစ်ချက်မာန်ဖီသလိုေ၇၇ွတ်လိုက်၇င်း ကောင်မလေး လက်နှစ်ဖက်ကို သူ.လက်တစ်ဖက်နဲ. ဖမ်းချူပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးမျက်နှာလေး ကိုညာလက်နဲ. ဖမ်းကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို အတင်းစုပ်ပါတော့တယ်။ ကောင်မလေးက မျက်နှာလေးကို ၇ှုံမဲ့ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တင်းတင်း စေ့ထားတော့ ကျော်နိုင့်မှာ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုစုပ်ဖို. မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျော်နိုင်ကလဲ သမ္ဘာပဲ...ညာဘက်လက်ကြီးနဲ. ဘယ်ဘက် နို့သီးလေးကို ခပ်တင်းတင်း တစ်ချက်ဆုပ် ညှစ်ပစ်လိုက်တယ်။
ကောင်မလေး ကိုယ်လုံးလေး ထွန်.ထွန်.လူးသွားတယ်။တစ်သက်လုံး ဒီအ၇ွယ်ထိ နေမလောင်၊လေမခ တယုတယ ထားထားတဲ့ အပျိုစင်နို့အုံနှုးနူးညံ့ညံ့လေးကို လက်ကြမ်းကြီးနဲ. အတင်းဖြစ်ညှစ်တာခံလိုက်၇တော့ ခမျာလေးမှာ နာလွန်း၇ှာလို.ထင်ပါ၇ဲ.။ “အား....အ..” ဆိုတဲ့အသံလေးနှင့် အတူ မျက်ဝန်းက မျက်၇ည်လေးတွေတောင် စိမ့်ထွက်လာတယ်။ဒါကိုကျော်နိုင်က သွေးအေးအေးနှင့် ခဏစောင့်ကြည့်ပြီးမှ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို စုပ်ယူနမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို အတင်းစေ့မထားတော့ ပါဘူး။ နောက်တစ်တစ်ခါ သူ.နို.သီးလေး အညှစ်ခံ၇မှာစိုးလို.ထင်ပါ၇ဲ.။
ဒါပေမယ့် မျက်ဝန်းကတော့ မျက်၇ည်စလေးတွေ တစ်လိမ့်လိမ့် စီးကျနေလေ၇ဲ.။အဲတော့မှ ကျော်နိုင်၇ဲ. ညာလက်ကြီးဟာ စောက်ဖုတ် လေးနေ၇ာပြန်ေ၇ာက်သွားပြီး အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပွတ်သပ်နေပါတော့တယ်။ပွတ်သပ်နေတဲ့ လက်ဝါးကြီး ထဲကလက်ခလယ် ဟာတစ်ချက်တစ်ချက် စောက်စေ့ လေးကို ထိလိုက် ၊တစ်ချက်တစ်ချက် စောက်ခေါင်းလေး ထဲကို ဝင်မလိုလို ဖြစ်လိုက် ၊ဟိုးအောက်နားေ၇ာက်သွားပြန်၇င်လဲ စအိုဝလေးကို ကလိသွားလိုက်နှင့် ကျော်နိုင်ဟာ လက်တစ်ဘက်တည်းနှင့်ကို စိမ်ပြေ နပြေ ကစားနေတယ်။
မကြာပါဘူး။ကောင်မလေး ၇ဲ.စောက်ပတ်လေးဟာ အတွေ.ကို မလွန်ဆန်နိုင်၇ှာပဲ စောက်၇ည်ကြည်လေးတွေ တစ်မိမ့်စိမ့် ထွက်လာ၇ှာပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာပဲ့ှကျော်နိုင်က စောက်စေ့ လေးကို လက်ခလယ်နှင့် ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး မ၇ပ်မနားကုပ်လိုက်ပါတယ်။ သူကုပ်လိုက်တာကောင်မလေးအယားပြေမပြေတော့ မသိဘူး။ လှုပ်လို.၇တဲ. ဘယ်ဘက်ခြေထောက်လေး ဟာ ကွေးလာလိုက်၊ဆန်.သွားလိုက်၊ဒူးလေးထောင်လာလိုက်၊ ခြေထောက်လေးပြန်ဆင်းလိုက်နှင့် တစ်ချောင်းထဲ ယောက်ယက်ခတ်နေပါတယ်။ပါးစပ်ကလဲ တအင်းအင်းနဲ. ညည်း သံလေးလားမသိ။
သေချာတော့မကြား၇ဘူး။ကျော်နိုင်က သူ.နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို မလွှတ်တမ်း စုပ်ထားတော့ ခမျာလေးမှာ ညည်းတာတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် မညည်း၇၇ှာဘူး။ ခဏနေတော့ ကျော်နိုင်က ကောင်မလေး ကိုယ်လုံးလေးပေါ်ကို တခြမ်းဖိထားတဲ့ အနေအထားကနေ ပေါင်လုံးလေး နှစ်လုံးကြားထဲ ကို နေ၇ာယူလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဘယ်ဘက်လက်က မွေ.၇ာပေါ်ထောက် ၊ ညာဘက်လက်က လီးကြီးကိုကိုင်ပြီး ကောင်မလေးစောက်ဖုတ်အဝမှာ တေ့လိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာ သူ့ပေါင်လေး နှစ်လုံးကြားမှာ ကျော်နိုင့် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးေ၇ာက်နေတာကိုမနေတတ်လို. ထင်တယ်။ ပေါင်လုံးလေးနှစ်လုံးကို အတင်းပြန်စေ့ဖို.ကြိုးစားတယ်။ ဘယ်ဖြစ်နိုင်တော့မှာလဲ။ သူ.ခန္ဒာကိုယ်လေး၇ဲ. နှစ်ဆလောက်၇ှိတဲ့ ကျော်နိုင့် ကိုယ်လုံးကြီးကို ဖယ်ပြီး ပြန်စေ့ဖို. သူ.ပေါင်လုံးလေးတွေမှာ လုံလောက်တဲ့ အားမ၇ှိ၇ှာဘူး။
ပေါင်လုံးလေးတွေစေ့မ၇ပြန်တော့ တစ်ခါ သူ.ကိုယ်လုံးလေးကို ဘယ်ဘက်စောင်းလိုက်ပြီး မှောက်၇က်ဖြစ်ဖို.ကြိုးစားပြန်တယ်။ ကျော်နိုင်က မွေ.ရာပေါ် လက်ထောက်ထားတာကနေ ကောင်မလေးကိုယ်လုံးလေးပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်တယ်။ ကောင်မလေး ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့မှ ကျော်နိုင်ဟာ သူ.လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်အဝလေးမှာ တေ့လိုက်တယ်။ဒါပေမယ့်...
ကောင်မလေးဟာ လှုပ်လို.၇တဲ့ လက်လေးနှစ်ဖက်နှင့် သူ.၇တနာ စောက်ဖုတ်လေးကို အတင်းအုပ်ထားပြန်တယ်။ ကျော်နိုင်တေ့လိုက်တဲ့ လီးဒစ်ကြီးဟာ စောက်ဖုတ် လေးကိုမထိပဲ အုပ်ကာထားတဲ့ လက်ဖမိုးလေးတွေကို သာသွားထိတယ်။ ကျော်နိုင် ချွေးတွေလဲ ပျံနေပါပြီ။ ဒေါသလဲထွက်သွားပုံ၇တယ်။ “တောက်” တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တယ်။ နောက် ကောင်မလေး ၇ဲ.အညှာကို ပြန်သတိ၇သွားပုံ နှင့် ပြုံးလိုက်ပါတယ်။
နောက် ဘယ်ဘက်နို.အုံလေး ကို ညာလက် နဲ. တင်းတင်းဆုပ်ညှစ်ပစ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးဟာ “ အား...အ..ဟ..”ဆိုတဲ့ အသံလေးနှင့် ခေါင်းလေးဘယ်ညာ ၇မ်းခါသွားတယ်။ကျော်နိုင်က လွှတ်မပေးပါဘူး။ ဒီတစ်ခါ ညှစ်လိုက်တဲ့ အားဟာ သေးပုံမ၇ဘူး။ ကျော်နိုင့်လက်ကအကြောကြီးတွေထောင်နေတာ တောင်မြင်နေ၇တယ်။ကောင်မလေးဟာ နာလွန်းလို. မျက်၇ည်တွေ ကျ၇င်း “ လွှတ်.. လွှတ်...လွှတ်ပါတော့။နာလှ ပြီ...အား..ကျွှတ်...ကျွှတ်...”လို.ပြော၇င်းတောင်းပန်တယ်။
ကျော်နိုင် ကပြုံးလိုက်တယ်။ နောက် လွှတ်ပေးမလိုလို နဲ.လက်ကို ၇ုတ်လိုက်ပြီးမှ နို.သီးခေါင်းလေးကို လိမ်ဆွဲ ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာ
ကျော်နိုင်လက် ၇ုတ်လိုက်တော့ နာကျင်တာသက်သာသွားပုံ နဲ့. ကျုံ.ထားမိတဲ့ ပခုံးလေးကို ပြန်ဖြေချ၇ုံ၇ှိသေး ကျော်နိုင်က နို.သီးခေါင်းလေးကို လိမ်ဆွဲလိုက်တော့ “ အ...အားးး” ဆို အသံစူးစူးလေးနဲ. တစ်ချက်အော်လိုက်ပြီး မှ သူ.နို.သီးလေးကို ပွတ်၇င်းတဟင့်ဟင့် နဲ. ငိုပါတော့တယ်။
ကျော်နိုင်ဟာ ကောင်မလေး ငိုနေတာကို အ၇သာခံကြည့် နေပါသေးတယ်။ကောင်မလေးဟာ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို တ၇ှုံ၇ှုံနဲ. မျက်၇ည်တွေကျ၇င်း ၇ှိုက်၇ှိုက်ငိုနေတယ်။ သူ.နို.အုံဖြူဖြူနုနုလေး ကိုပွတ်၇င်းနဲ.ပေါ့။ ကျော်နိုင်ကလဲ ၇က်စက်တာပါ။ နုနုနယ်နယ် နို.အုံ လေးကို ညှစ်ပစ်လိုက်တာများ လက်ငါးချောင်း၇ာ ကြိးအစင်းလိုက်ထင်လို.။
သကောင့်သားက သူ.လက်၇ာကိုသူ သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်သေးတယ်။ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်တာပဲ။သူ ကောင်မလေးကိုယ်လုံးလေးပေါ် မှောက်လိုက်၇င် သူ.မျက်နှာက ကောင်မလေး ခေါင်းပေါ်ေ၇ာက်နေတာဆိုတော့ နို.သီးမပြောနဲ. မျက်နှာတောင်မြင်၇မှာမဟုတ်ဘူး။ အခုလဲ နို.အုံလေးကို သေချာကြည့်ပြီး ကြည့်လို.ဝတော့မှ သူ့လုပ်ငန်း ကိုသူ ပြန်စတယ်။
လီးကြီးကို သေချာကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်အဝလေးမှာ တေ့လိုက်ပြန်တယ်။ ပြီးတော့ သာသာလေးထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ ကောင်မလေး ဟာ ဒီတစ်ခါတော့ ၇ုန်းလဲမ၇ုန်းတော့၊ လက်နဲ.လဲမကာတော့ဘူး။ဒါပေမယ့် “အီ...”ဆိုပြီး ကြောက်ကြောက်နှင့် သူ.ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကို အတင်းတောင့်ထားတယ်။ ဒီတော့ကျော်နိုင့်မှာ လီးကိုေ၇ှ့တိုးပြီး ထိုးလိုက်၇င် သူ.ခါးကပါေ၇ှ့ေ၇ာက်သွားတော့ ကြောက်ကြောက်နှင့် အတင်းတောင့်ထားတဲ့ ကောင်မလေးပေါင်နှစ်ချောင်း ကိုဖိမိပြီး ကောင်မလေးခန္ဒာကိုယ်လေးက ခေါင်း၇င်းကိုေ၇ွ.သွားတယ်။ တစ်ခါ ကျော်နိုင်ကမဝင်သေးတော့ေ၇ှ့တိုးပြီး ထည့်လိုက်ပြန်၇င်း ကောင်မလေးကိုယ်လုံးလေးကေ၇ွ.သွားပြန်၇င်း နဲ.နောက်ဆုံးကောင်မလေးဟာ ခုတင်ခေါင်း၇င်းကို ခေါင်းနဲ. တိုက်၇ုံတင်မကတော့ပဲ အပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဟာ ခုတင်ခေါင်း၇င်းမှာ ကန်.လန်.ကြီး ၊ကျော်နိုင်က အောက်ကိုပဲ မဲနေတော့ ကောင်မ လေး ကန်.လန်.ကြီးဖြစ်နေတာချက်ချင်းသတိမထားမိဘူး။
ခဏနေ နဖူးပေါ် စီးကျလာတဲ့ချွေးတွေကို သုတ်၇င်းကြည့်လိုက်တော့မှ ကောင်မလေး ကန်.လန်.ကြီးဖြစ်နေတာကိုမြင်သွားပြီး ကောင်မလေးခါးကို ဇုံကိုင်ကာ အောက်ကိုပြန်ဆွဲချတယ်။ကိုယ်လုံးလေးဟာ အ၇ုပ်လေးတစ်၇ုပ်လိုေ၇ွ.ကနဲ ပါသွားတယ်။ ဘယ်လောက်ကြောက်နေတယ်မသိဘူး။ သူ.ခြေထောက်လေးတွေကို အတင်းအားထည့်ပြီး တောင့်ထားတာ ခြေမလေးတွေတောင် ကုပ်လို.။ကျော်နိုင်လဲ ဒါကိုမြင်တယ်။ဒါပေမယ့် သူလဲမပြုံးနိုင်တော့ဘူး။သူ.တစ်ကိုယ်လုံးေ၇ချိုးထားသလို ချွေးတွေနစ်နေပြီလေ။ မောလဲမောနေပုံ၇တယ်။ သူ.အသက်၇ှုသံဟာ အပြင်ကတောင်ကြား၇တယ်။ကျော်နိုင်ဟာ မွေ.၇ာပေါ်ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ခဏအမောဖြေနေတယ်။ အမောဖြေနေတုန်း သူ.လီးက ပျော.ကျသွားတယ်။သူလဲသိတယ်။ သူဟာ ကောင်မလေးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းတွန်းဖယ်ပြီး အခန်းတံခါးဝနားကိုလျှောက်လာတယ်။ ကျွှန်တော်တို.လဲ ကမန်းကတန်း ဧည့်ခန်းကို ပြန်ပြေးပြီး အ၇က်သောက်ချင်ယောင်ဆောင်နေ၇တယ်။
မကြာခင်ပဲ တံခါးဖွင့်သံကြား၇လို. လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျော်နိုင်က တဘက်တစ်ထည် ခါးမှာပတ်ပြီး ထွက်လာတယ်။ ချွှေးတွေကို အဲဒီတဘက်နဲ.သုတ်လာပုံ၇တယ် ။ချွှေးဘယ်လောက်များထွက်တယ်မသိဘူး၊ တဘက်တစ်ထည်လုံးေ၇စိမ်ထားသလို နစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွှန်တော်လဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး “ဆ၇ာသမား၊မောလာပြီလား၊ေ၇ာ့..ေ၇ာ့...အမောပြေ တစ်ခွက်လောက်လုပ်လိုက်” ဆိုပြီး အ၇က်ခွက်ကိုကမ်းပေးလိုက်တော့ ဒင်းက တစ်ခွက်လုံးကိုေ၇သောက်သလို တ၇ှိန်ထိုးမော့ချပြစ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ အနားမှာ ထိုင်ပြီး “ အသစ်ဆိုတော့ နည်းနည်းပြိုင်းတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမယ့် အေးဆေးပါ” ဆိုပြီးနောက်တစ်ခွက် ထပ်ကစ်တယ်။ “အေးပါကွာ။ မင်းအဆင်ပြေ၇င်ပြီးတာပဲ ။အပြင်ဘက်ကိုတော့စိတ်ချ။ငါတို.ဒီမှာသောက်၇င်း ကင်းစောင့်ပေးနေတယ်။” ကျွှန်တော်၇ွှီး လိုက်တော့ ဒီကောင်က “သောက်တော့သောက်၊မှောက်တော့မနေနဲ.နော်။ ကဲ..ငါနောက်တစ်ချီဝင်လိုက်အုံးမယ်။”ပြောပြောဆိုဆို အခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားပါတော့တယ်။
ကျွှန်တော်တို.လဲ အ၇က်ခွက်လေးတွေ ပြန်ချပြီး ချောင်းကြပြန်တာပေါ့။ ကောင်မလေးဟာ ကုတင်ပေါ်မှာ ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်၇င်း တ၇ှုံ၇ှုံ ငိုနေတယ်။ ကျွှန်တော်တောင် တွေးမိသေးတယ်။ ဒူးနဲ.မျက်၇ည် သုတ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပြောတာ ဖြစ်မယ်လို.လေ။ ကျော်နိုင် ဝင်လာတာ တွေ.တော့ သူလန်.သွားတဲ့ပုံလေးဟာ သနားစ၇ာလေးဗျာ။
မျက်၇ည်တွေစိုနေတဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေး နဲ. ကျော်နိုင့် ကိုမော့ကြည့်၇ှာတယ်။ ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေးက ဖွာလန်ကြဲလို.။ ကျော်နိုင် ကခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်ကို ဖြေချလိုက်တယ်။ ခဏနားလိုက်လို. အားပြန်ပြည့် သွားတဲ့ လီးကြီးဟာ ကောင်းကင်ကို ပျံတက်တော့မယ့် ဒုံးပျံ ကြီးလိုပဲ မတ်မတ်ကြီး။
ကောင်မလေး ဟာကျော်နိုင့် လီးကြီးကို အနီးကပ်မြင်လိုက်၇တော့ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားပြီး ပါးစပ်လေး အဟောင်းသား ဖြစ်သွားတယ်။ ခုနတုန်းကတော့ လူး၇င်းလှိမ့်၇င်းမို. မမြင်လိုက်၇တာဖြစ်မယ်။ ခုမှ အ၇ွယ်ေ၇ာက်ပြီးယောက်ကျားတစ်ယောက်၇ဲ. လီးကိုသေသေချာချာ မြင်လိုက်၇တော့ ကြောက်သွားလိုက်တာများ ကုတင်ပေါ်မှာ နောက်ဆုတ် နောက်ဆုတ် နဲ. ဖင်လေးေ၇ွ.ေ၇ွ.ပြီးဆုတ်သွားတာ။ ခေါင်း၇င်းက ကုတင်တိုင် နဲ. တိုက်မိမှ ၇ပ်တော့တယ်။
နောက်ဆုတ်သွားတဲ့ ကောင်မလေးကို ကျော်နိုင်က ဆံပင်ကို လှမ်းဆွဲပြီး ပက်လက်လှန်ပစ်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေး ဟာ ကြောက်လွန်းလို.ထင်တယ်။ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်။ ကျော်နိုင်ကတော့ သနားပုံ မ၇ပါဘူး။ ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး ပေါင်တံ ဖြူဖြူလေး နှစ်ချောင်းကို ဆွဲဟလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီကြားထဲကို ဝင်မှောက်လိုက်တယ်။
ကောင်မလေးဟာ မျက်နှာလေးကို တစ်ဘက်လှည့်ပြီး တစ်သိမ့်သိမ့် ၇ှိုက်ငင်၇င်း လက်ဝါးလေး နှစ်ဖက်နှင့် မျက်နှာလေးကိုအုပ်ထားတယ်။ ကျော်နိုင်က တော့ အောက်ပိုင်းကိုပဲ မဲနေပါပြီ။ သူ.၇ဲ. လီးကြီးကို ကောင်မလေး စောက်ဖုတ် အဝ လောက်မှာမှန်းပြီး တေ့လိုက် တယ်။ နောက် ဖြေးဖြေးချင်း ဖိချလိုက်တယ်။
ကောင်မလေးဟာ ခုနက ခံထား၇တာတွေ ကြောင့်ထင်တယ်။ ၇ုန်းလဲ မ၇ုန်းတော့၊ လက်နဲ.လဲ မကာတော့ဘူး။ နောက်ပြီး ပေါင်တံ လေးနှစ်ချောင်းကလဲ ကျော်နိုင် ဆွဲဖြဲ ထားလို. တော်တော်ဟ နေတော့ ကျော်နိုင့် ခါးကို ထောက်မနေဘူး။ ကျော်နိုင့် လီးကြီးဟာ စောက်ဖုတ်အဝလေးကို သွားထိတယ်။ ကောင်မလေး တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်တုန်သွားတယ်။ နောက် ကျော်နိုင်က ဖိထည့်လိုက်တယ်။ အ၇ည်လေးတွေ ခန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ စောက်ဖုတ် အပြင်နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို လီးကြီးဟာ ထိုးခွဲပြီး အထဲ ဝင်မလိုလို နဲ. အောက်ကို ချောပြီး ကျသွားတယ်။ မွေ.ယာကိုတောင်သွားထောက်မိတယ်။ ကျော်နိုင်က နောက်တစ်ကြိမ် အောက်ကနေ ပင့်ပြီး ထည့်လိုက်ပြန်တယ်။ လီးဒစ်ကြီးဟာ စောက်ဖုတ် အပေါ် နှုတ်ခမ်းလေး လေးတွေကို ပွတ်ဆွဲသွားပြီး စောက်စေ့လေးကို ခလုတ်တိုက်၇င်း၇ပ်သွားတယ်။
ဒီလိုမျိုး နှစ်ခါ သုံးခါဖြစ်တော့ ကျော်နိုင် စိတ်မ၇ှည်တော့ ဘူးထင်တယ်။ ဘယ်လက်နှင့် ကောင်မလေး ခေါင်းကို အုပ်ကိုင်ပြီး ညာလက်ကလိးကို ကိုင်လို. စောက်ဖုတ်အဝ လေးထဲ ကို ထိုးထည့်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒစ်ထိပ်ဖျားကြီးဟာ စောက်ဖုတ်အဝလေးမှာ သေချာကြီးထောက်မိပါတယ်။ ဖိသွင်းလိုက်တော့ စောက်ဖုတ် အသစ်စက်စက် လေး၇ဲ. နှုတ်ခမ်းသားလေး တွေတောင် ကြုံ.ပြီးချိုင့် ဝင်လာတယ်။
လီးတန်ကြီးကလဲ ဖြောင့်စင်းမတ်နေတာကနေ ကွေးမလိုလို တောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ကောင်မလေး “ အာ့...အာ..” ဆိုပြီး ခါးလေး ကော့တက်လာတယ်။ ပေါင်လုံးဖြူဖြူ ကြီးကအသားဆိုင်တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်သွားတယ်။ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က ကျော်နိုင့် လက်မောင်းအိုးကြီးတွေကို အတင်း တွန်းတယ်။
နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ကြုံ.ပြီး ချိုင့်ခွက်လာတယ်။ ဒစ်အဖျားပိုင်း ထိပ်ဖူးလေး ဝင်နေပြီ။ ကောင်မလေး အံလေးကြိတ်ပြီး ကျော်နိုင့် လက်မောင်းကြီးကို အတင်းဆုပ်ညှစ်ထားတယ်။ သူ.ခမျာကြောက်လဲကြောက်၊ နာလဲနာနဲ့လုပ်မိလုပ်၇ာ အတင်းဆုပ်ညှစ်မိတာဖြစ်မယ်။ လက်သည်းချွှန်ချွှန်လေးတွေတောင် ကျော်နိုင့် အသားထဲစိုက်လို. ။ သွေးစလေးတွေတောင်စို.ထွက်လာတယ်။
ကျော်နိုင်ကတော့ သတိတောင်ထားမိပုံမ၇ဘူး။ သူအားနည်းနည်းစိုက်ပြီးဖိထည့်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေး ခေါင်းလေး ဘယ်ညာ၇မ်းခါသွားတယ်။ ဖင်လုံးကြီး တွန်.ကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ခုနစိုက်နေတဲ့ လီးထိပ်ဖူးလေး ဘေးကို ချော်ထွက်သွားတယ်။ ကျော်နိုင် စိတ်ဆိုးသွားပါပြီ ။"တောက်" ကနဲ တောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်၇င်း ခုတင်ပေါ်ကဆင်းသွားတယ်။
နောက် နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်သွားတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို ပြန်ထွက်လာတယ်။ သူ.လက်ထဲမှာ ဆီပုလင်းကြီး ကိုင်လို.။ နောက် ကုတင်ဘေးမှာ၇ပ်
ဆီ ပုလင်း အဖုံးဖွင့်ပြီး ဆီေ၇တွေ သူ.လီးပေါ် လောင်းချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဂွင်းတိုက်သလို နှစ်ချက် သုံးချက် ဆွဲလိုက်သေးတယ်။ သူ.လီးကြီး ဟာ ဆီေ၇တွေနှင့် ပြောင်လက်ပြီး အကြောကြီးတွေတောင် ပိုထောင်လာသလိုပဲ။ နောက် ကောင်မလေး ပေါ်ကိုတက်ခွလိုက်ပြန်တယ်။ လီးကြီးကို သေချာကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်အဝလေးကို တေ့လိုက်တယ်။ လီးတစ်လျှောက် စီးကျလာတဲ့ ဆီေ၇ တွေဟာ ကောင်မလေး စောက်ဖုတ်လေးပေါ်ကို တစိမ့်စိမ့် စီးကျလာ တာ စောက်ဖုတ်လေးတောင် ပြောင်ပြောင်လက်လက်လေးဖြစ်လာတယ်။
နောက် ကျော်နိုင်ဟာ ဖိချလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဆီ တန်ခိုးနှင့် ဒစ်ဖူးကြိးဟာ တဖြည်းဖြည်း စောက်ဖုတ်လေးထဲ တိုးဝင်သွားပါပြီ။ စောက်ဖုတ် အပြင် နှုတ်ခမ်းသားလေး တွေကို အတင်းထိုးခွဲပြီး တ ထစ်ထစ်နဲ့. ဝင်သွားလိုက်တာ အဲဒီ ထစ်ထစ် ဆိုတဲ့ အသံကို ဒီကနေတောင်ကြား၇တယ်ဗျာ။
ကောင်မလေး "အား..အ..ဟ ...အ.."ကနဲ အော်ညည်း၇င်း တကိုယ်လုံး ထွန်.ထွန်.လူးသွားတယ်။ ခံစား၇တဲ့ ဝေဒနာကတော့ သေးပုံ မ၇ဘူး။ စောက်၇ည်ကြည်လေးတွေ ထွက်နေတုန်းကတောင် သွင်းလို.မ၇ခဲ့တာ ၊အခု ဆီ သုတ်ပြီးထည့် လိုက်တော့ ဝင်သာဝင်သွား တယ် အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့ စောက်ဖုတ် ကြွက်သားလေးတွေက ဆန်.ကျင်နေပုံ၇တယ်။
ကျော်နိုင်ကတော့ ဒစ်လောက်ပဲဝင် သေးပေမယ့် ဆက်မသွင်းသေးပဲ မျက်နှာကို မော့ပြီး "၇ှီး..အား.."ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ စောက်ဖုတ်အသစ်စက်စက်ကလေး၇ဲ့ ကြွက်သားတွေဟာ သူ.ဒစ်ကြီး ကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် အတင်းညှစ်ထားသလို ဖြစ်နေတော့ သူလဲ ခံစားသွား၇တယ်ထင်တယ်။
ခဏလောက် တ၇ှီး၇ှီးနဲ့. ဇိမ်ခံနေပြီးမှေ၇ှ.ကို ဆက်ဖိသွင်းလိုက်ပြန်တယ်။ စောက်ဖုတ်အပြင်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ အထဲကို လိပ်ဝင်သွားတယ်။ လီးကြီးက တေ၇ွ.ေ၇ွ.နဲ. တိုးဝင်သွားတယ်။ ကောင်မလေး မျက်နှာလေး၇ှုံမဲ့ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြတ်လုမတတ်ကိုက်ထားတယ်။ တေ၇ွ.ေ၇ွ.ဝင်သွားတဲ့ လီးကြီးဟာ သုံးပုံ တစ်ပုံလောက်အေ၇ာက်မှာေ၇ှ့ဆက်မတိုးတော့ဘူး။ အထဲကတခုခု နှင့် ခံနေသလို လို၊ ဘာလဲဆိုတာ ကျော်နိုင်
သဘောပေါက်ပုံ၇တယ်။ ခါးကို ကစား၇င်း ဝင်သလောက်လေး နှစ်ချက်သုံးချက် လောက် ကပ်ပြီးညှောင့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဖင်ကြီးမပြီးအားယူ၇င်း ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်။ လီးကြီးဟာ "ပလွတ်၊ ဖောက် "ဆို လေးပုံ သုံးပုံလောက်ဝင်သွားတယ်။ ကောင်မလေး "အဟ..အ..အား.."ကနဲ အော်တယ်။ နောက် ကျော်နိုင့် ၇င်ဘတ်ကြီးကို ဘုန်းဘုန်းထု၇င်း တဟီးဟီး နဲ.ငိုပါတော့တယ်။ ကျော်နိုင် က ကောင်မလေးထု၇ိုက်နေသမျှကို မနာသလိုပဲ လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်လေးထဲ စိုက်ထား၇င်း ငြိမ်ခံနေတယ်။
အမှန်က ၇င်ဘတ်ကိုတဘုန်းဘုန်းထုနေတာ သူနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်မှာ သူ.လီးကြီးကို ညှစ်ထားတဲ့ အားဟာ တော်တော် တင်တင်းကြီး ညှစ်ထားသလို ဖြစ်နေတော့ အဲဒါကပိုကောင်းနေတာနှင့် သူဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ လီးကြီးစိုက်ဝင်နေတဲ့ စောက်ဖုတ် ကွဲကြောင်း လေးတစ်လျှောက်ကနေ သွေးစီးကြောင်းလေး တစ်ခုလဲ စီးကျလာနေတယ်။
ခဏ ငြိမ်နေပြီးတော့ ကျော်နိုင် ခါးလေးကို နဲနဲ လှုပ်ပေးတယ်။လီး ကြီးကစောက်ဖုတ်
နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဟိုဘက်ဒီဘက် ဖိမိပြီး စောက်ဖုတ်အဝဟသွားတဲ့ နေ၇ာလေး တွေကနေ သွေးစလေးတွေထပ်ထွက်လာတယ်။ နောက်ခါးလေးကိုလှုပ်ပြီးအသာလေးကပ်ညှောင့်တယ်။ လီးကြီးက အထဲလဲ မဝင်ဘူး။အပြင်လဲမထွက်ဘူး။ တန်းလန်းကြီး။ ကျော်နိုင်ကလဲ ဇွတ်ဆက်မသွင်းပါဘူး။
ကောင်မလေး ကိုသနားလို.တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူ. ထိပ်တွေ ကျိမ်းနေလို.ဖြစ်မယ်။ ခဏလောက်ကပ်ညှောင့်လိုက်တော့ ကောင်မလေး ငိုသံလေး တိုးလာတယ်။ တိတ်တော့ မတိတ်သေးဘူး။ တိုးတိုးလေး၇ှိုက်နေတုန်းပဲ။ စောက်ဖုတ်လေး ထဲက အ၇ည်ကြည်လေးတွေလဲ တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာတယ်။
အဲ့တော့မှ ကျော်နိုင်က သူ.လီးကို ခါးလေးကြွပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်တယ်။ကောင်မလေး ခမျာတော့ အဝင်ဆိုးသလိုအထွက်လဲသက် သာပုံမ၇ဘူး။ ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ လီးဘေးသားတစ်လျှောက် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေလိပ်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။ ဒစ်ဖျားနားေ၇ာက် တော့ အတွင်းသားတွေပါ အပြင်ကို လိုက်ထွက်တော့မယ် ထင်လို.လားမသိ။ ကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းလေးကိုက် ပြီးခါးလေးကော့တက်လာတယ်။
ကျော်နိုင်ကလဲ အဆုံးထိမထုတ်ပါဘူး။ ပြန်သွင်း၇ခက်မှာဆိုးလို.ထင်တယ်။ဒစ်ဖျားနားေ၇ာက်တော့ အသာလေး လျှောပြီး ပြန်သွင်းလိုက်တယ်။ ကောင်မလေး ကော့တင်ထားတဲ့ ခါးလေး အင်း ကနဲ သက်ပြင်းချသံနှင့် အတူပြန်ကျသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခုနေ၇ာက်ခဲ့ တဲ့ နေ၇ာနားလေးေ၇ာက်တော့ နည်းနည်းကျပ် နေပြန်တယ်။ ဆက်သွင်း၇ခက်နေတယ်။
ကျော်နိုင်က ဆက်မသွင်းပါဘူး။ ဝင် သလောက်လေး ပဲ ကပ်ပြီး မှန်မှန်လေးလုပ်နေတယ်။ ကောင်မလေး ငိုသံလေး တိတ်သွားပါပြီ။ မျက်၇ည်စလေးတွေတော့ ပါးပြင်လေးပေါ်မှာ၇ှိနေတုန်းပဲ။ စောက်ဖုတ်လေးထဲ ကအ၇ည်လေးတွေလဲ ထပ်ထွက်လာတယ်။ ကျော်နိုင် လိုး၇တာ အဆင်ပြေသလိုဖြစ်လာတယ်။
စောက်၇ည်ကြည်လေးတွေ နှင့်ဆိုတော့ စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့။ အဲဒီ လို မှန်မှန်လေး လုပ်နေတုန်း တစ်ချက်ဗြုန်းဆို ကျော်နိုင် က အပြင်မှာကျန်နေတဲ့ လီးအ၇င်းပိုင်း အဆုံးထိေ၇ာက်အောင် ဆောင့်ချလိုက်တယ်။ "အ
..အွ....."ကနဲ အော်၇င်း ကောင်မလေး သူ. ဗိုက်သားချပ်ချပ် လေးကိုပွတ်တယ်။
သူ အော်တာကလဲ အ တွေ အားတွေမဟုတ်ဘူး။ အွ ဆိုတဲ့ အသံမျိုး။အထဲမှာ အောင့်သွားပုံ၇တယ်။ မျက်နှာလေးကလဲ ၇ှုံမဲ့လို. ။ အပြင်းအထန် ကြီးတော့ ခံစား၇ပုံမ၇ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝေဒနာကလဲ သေးပုံတော့မ၇ဘူး။ နည်းနည်း ခြောက်သွေ.စ မျက်၇ည်လေးတွေ ပြန်စီးကျလာတယ်။
ကျော်နိုင်ကတော့ ဆီးခုံချင်းနှစ်ခု ကပ်၇က်ထပ်ထာပြီး ကောင်မလေး မျက်နှာလေးကို လက်ထောက်ပြီးကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ လီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထုတ်ပြီး တစ်ဝက်လောက်ေ၇ာက်တော့ ဖတ် ကနဲနေအောင် ဆောင့်ချလိုက်တယ်။ ကောင်မလေး မျက်နှာမော့ က နဲဖြစ်သွားတယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကို ကိုက်ထားတယ်။
ဆောင့်ချလိုက်ချိန်မှာ စောက်ဖုတ်လေးထဲက စောက်၇ည်လေးတွေ ဖွတ် ကနဲ အပြင် ကိုထွက်လာတယ်။ အပေါက်ဝလေးက ကျပ်တော့ အမြုပ်လေးတွေ ထလို.ပေါ့။ အဲဒီ အမြုပ်လေးတွေပေါ်မှာ နီညိုေ၇ာင် သွေးစလေးတွေလဲ စွန်းထင်းလို.။ကားထားတဲ့ ပေါင်လုံးလေး နှစ်လုံး လှုပ်သွားတယ်။
နောက် တစ်ချက်။ နောက် တစ်ချက်။နောက် တစ်ချက်...ကျော်နိုင် ဟာ မ၇ပ်မနားလို.
ပြော၇လောက်အောင် ကို အတင်းနင်းပြီး ဆောင့် တော့တာ။ ကောင်မလေး ကိုယ်လုံးလေး ဟာ တသိမ့်သိမ့် ၇မ်းခါနေတယ်။ နို.အုံလေးနှစ်လုံးဆိုေ၇ထည့်ထားတဲ့ ပူစီဖောင်း လေးလို လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်လေးပေါ့။
လက်လေးနှစ်ဖက်ကတော့ မွေ.ယာပေါ်ထောက်ထားတဲ့ ကျော်နိုင့် ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဝတ်ကို ထိတယ်ဆို၇ုံလေး ကိုင်ထားတယ်။ ပေါင်လုံးလေး နှစ်လုံးက
၇ိုး၇ိုး ကားထား၇ုံ မဟုတ်တော့ပဲ ဒူးလေးထောင်ပြီး ကျော်နိုင့် ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ လှုပ်နေတယ်။အင်း သူ လဲ သက်သာသလို နေတတ်သွားပြီထင်တယ်။
အခုဆို ကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ကဘာသံမှ မထွက်တော့ပေမယ့် အောက်က စောက်ဖုတ်လေး ကတော့ စောက်၇ည်လေး တွေ ရွှဲနေပြီး ကျော်နိုင် တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း စွပ် ပလွပ် ဆိုအသံလေးတွေထွက်နေတယ်။ ဖြူ၇ွှဲ ၊ညိုတွဲ ၊ဆိုတဲ့စကားကလည်း မှန်လောက်တယ်။ အသားဖြူဖြူ ကောင်မလေး စောက်ဖုတ်လေးထဲ ကထွက်တဲ့ အ၇ည်တွေ ဟာ ဖင်ကြားလေးကနေတဆင့် မွေ.ယာ ပေါ် စီးကျ နေ၇ုံမက ကျော်နိုင့် လဥ ကြီးတွေပါ ၇ွှဲ၇ွဲစိုနေပြီ။
ဟာမှောက်ပြီးလုပ်၇တာ ညောင်းလို.ထင်တယ်။ မွေ.ယာပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တယ်။
နောက် ကောင်မလေး ပေါင်တံ လေးနှစ်ချောင်း ကို သူ.ဘယ်ဘက် ပခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်တယ်။ အဲ..ပေါင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ခြေသလုံးလေး တွေပေါ့။ ပေါင်လုံးကြီးကြီးတွေ ကိုတော့ သူက လက်နှစ်ဖက်နှင့် ပိုက်ထားတယ်။
ပြီးတော့ ခါးသက်သက် အားနှင့်ပဲ လိုးပါတော့တယ်။ ကောင်မလေးဟာ ခြေထောက်လေးနှစ်ချောင်း ကမိုးပေါ်ထောင်လို. အပေါ်ပိုင်း ကတော့ ကျော်နိုင့် ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ တသိမ့်သိမ့်လေး လှုပ်နေတာပေါ့။ မကြာပါဘူး။ ကျော်နိုင် အားမလိုအားမ၇ ဖြစ်လာပုံပေါ်တယ်။ ခြေသလုံးလေးတွေ ကို ပခုံးပေါ်ထမ်းထား၇က်ပဲေ၇ှ့ကိုမှောက်ချလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ အား၇ပါး၇ကြီးကို ဆောင့်ပါတော့တယ်။ ကောင်မလေး မျက်နှာလေးနှင့် ဒူး
ဟာ တစ်ချက်တစ်ချက် ထိသွားလောက်အောင် ကွေးကွေးလေး ဖြစ်နေတယ်။ ကျော်နိုင့် တစ်ကိုယ်လုံး ကို ကောင်မလေး၇ဲ့ ခါး သိမ်သိမ်လေးနှင့် ခံထား၇သလို ဖြစ်နေတော့ ကောင်မလေး ခါး လဲ နာပုံ၇တယ်။
နောက်ပြီး ဗိုက် ကိုချပ်ပြီး ကွေးထား၇တော့ သားအိမ်လမ်းကြောင်းများ တိုသွားသလားမသိ။ မွေ.ယာ ကို လက်လေးနှစ်ဖက်နှင့် ထုထုပြီး ကျော်နိုင် တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း "အ ..အဟ...အ...အွန်." ကနဲဖြစ်နေပါတယ်။ ကျောနိုင်ကတော့ နည်းနည်းမှ ညှာတာမယ့် သဘောမ၇ှိဘူး။
ဆောင့်ချက်တိုင်း ဆောင့်ချက်တိုင်းဟာ ပိုလို.သာ ပြင်းလို.လာတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလဲ ကြာကြာတော့ မဆောင့် နိုင်ပါဘူး။ အား၇ပါး၇ကြီး ၅ ချက်လောက် ဆောင့်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြား ကားတွေ ထဲကလို လီးကို အမြန်ထုတ် ၊ ပြီးကောင်မလေး မျက်နှာ ပေါ် လ၇ည် တွေ ပန်းချ လိုက်တော့တယ်။
********************************************************************** Posted by
Tun TunApril 11, 2015 at 9:00 PMigioygReplyDeleteAdd commentLoad more...
<!-currency converter widget - html code - fx-rate.net --> Euro Converter<!-end of code-->
ကျွန်တော်နဲ့ မချော (၃) ယောက်